Nhoroondo Yedu | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Kupa zvirongwa zvemhando yepamusoro kubva 1974Nhoroondo Yedu
BLI (Bouchereau Lingua International) yakazarura chikoro chayo chekutanga mumutauro we1976 kuMontreal, Quebec. Chinangwa chayo chaiva chokupa bhizimisi kudzidzisa kune vakuru vakuru uye vatungamiri mune dzimwe nhamba dzemabhizimisi uye nzvimbo dzeunyanzvi. Nguva pfupi yapfuura, BLI yakatanga kugamuchira vadzidzi vanobva kumativi ose enyika kuti vatore muzvirongwa zvayo zvekuFrench neChirungu.
Sezvo wakagadza mukurumbira waro sekambani inoudza unyanzvi, hutsva, uye muenzaniso wakanaka webasa rekutengeserana, chikoro chacho chakazobvuma kuwedzera kwekuda kwemitauro yemitauro uye yakatanga kupa michero yayo yepamusoro-shanduro kumakambani emunharaunda uye kumarudzi ose, kubva kumahofisi ayo ehurumende-akagamuchirwa .
Vashandi vakazvipira uye vanofarira kudzidzisa, pamwe neushamwari uye yakanaka mamiriro, siginecha yeBLI, iyo yakabudirira kuwana imwe kambasi muguta guru reQuebec.
Yedu Quebec City Campus inoisa nzira yekudzidziswa kwevadzidzi vepanyika mune mutauro weFrench.
Kubva ipapo, BLI yanga ichivandudza nzira yayo yekusangana nevadzidzi vanowedzera zvinodiwa uye zvavanofarira. Mazuva ano, BLI imwe yeinonyanyo zivikanwa mitauro yemitauro munyika uye inopa zvirongwa zvakasiyana siyana zvinoenderana nevadzidzi vanobva kwakasiyana tsika nemamiriro.
Munzvimbo yebasa remakambani, BLI haingopfuuriri kudzidzisa mutauro wakarongeka asiwo kuburitsa mitauro yemitauro sekushandura, ongororo, mabasa, nezvimwewo Vatengi vedu vemakambani vanosanganisira makambani emarudzi akadai saDeloitte, Coca Cola, Hydro Quebec, nezvimwewo.
Yakatenderedzwa neresitorendi, cafe uye yenhoroondo yekuvaka